AutoCAD सिभिल थ्रीडी, बाह्य डेटाबेसबाट पोइन्टहरू आयात गर्नुहोस् - Geofume
यस पोष्टमा हामी बाहिरी डेटाबेसबाट डाटा कसरी आयात गर्ने भन्ने बुझ्नेछौं, यद्यपि हामीले पोइन्ट्स ह्यान्डलिंगमा केहि अतिरिक्त पक्षहरू पनि विचार गर्नुपर्नेछ। हामी सिभिल थ्रीडी ट्यूटोरियलले ल्याउने उदाहरणको आधारमा हामी आधार बनाउँदछौं, फाइल पोइन्ट -१.डब्ल्यूजी र पोइन्ट्स.एमडीबी प्रयोग गरेर, अन्तमा तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्न लिंकहरू छन्।
विवरण कुञ्जी सिर्जना गर्नुहोस्
यसको उद्देश्य सिभिल थ्रीडीले हामी आयात गर्ने पोइन्टहरू कसरी सम्हाल्ने भन्ने कन्फिगर गर्नु हो, तिनीहरू कहाँ भण्डारण हुन्छन् र कुन मापदण्ड अन्तर्गत यसले तिनीहरूलाई डाटाबेसबाट चयन गर्दछ। यदि हामी डाटाबेस खोल्छौं y, x, z समन्वय बाहेक हामी वर्णन क्षेत्र (DSC) मा बिन्दुको प्रकार समावेश हुन्छ त्यसैले हामी यी बिन्दुहरू फिल्टर गर्न सक्षम हुन चाहन्छौं।
पहिले हामी फाईल पोइन्ट -१.डब्ल्यूजी खोल्यौं जुन यस अभ्यासको लागि पहिले नै तहहरू कन्फिगर गरिएको छ। अब उपकरण स्पेसमा, "सेटिंग्स" ट्याबमा, हामी "वर्णन कुञ्जी सेटहरू" चयन गर्दछौं र हामी दायाँ क्लिक गर्दछौं र "नयाँ" छनौट गर्दछौं।
यसले एउटा प्यानल खोल्छ जहाँ हामी सेटको नाम राख्छौं, जसमा हामी नाम र वर्णन दिन सक्छौं।
म "आँधी" नाम र वर्णन "तूफान नियन्त्रण पोइन्टहरू" प्रयोग गर्दैछु। त्यसो भए हामी "स्वीकार" गर्छौं।
अब चिनको लागि सिभिल एक्सएनएमएक्सएक्सले दुवै फिल्टरलाई कसरी आयात गर्नेछ र डाटा आयात गर्न र तहमा छान्ने छ कि तिनीहरू भण्डार गरिनेछ।
हामीले सेट विस्तार गर्नुभयो, दाँया क्लिक गरेर "कुञ्जी सम्पादन गर्नुहोस्" चयन गरेर, जसले हामीलाई पानोरामा मोडमा गुणहरू हेर्न अनुमति दिन्छ।
यहाँ हामी दुई कोडहरू थप्नुहोस्, पहिलो नाम POND * भनिन्छ, यहाँ हामी लेयर V-NODE-STRM चयन गर्नेछौं।
र अन्य MHST *, अर्को स्वरूपमा हामी STORM MH लाई ढाँचा परिवर्तन गर्नेछौं, जसले यसले यो लेबल हुनेछ तर पहिलो $ $ को रूपमा छोडिनेछ, ताकि वर्णन पूरा हुन्छ र सधै एकै तहमा।
यसले संकेत गर्दछ कि कुनै पनि पोइन्ट जसको वर्णन POND वा MHST को साथ सुरू हुन्छ, कुनै पनि चरित्र पछि संग्रहमा समावेश गरिनेछ। दिमागमा राख्नुहोस् कि यो प्रक्रिया "केस सेन्सिटिभ" छ, यसले यो केस-सम्वेदनशील हो भनेर देखाउँदछ।
दुवै अवस्थामा, दुवै शैली र लेबल शैली असक्षम छन्। समूहको बिन्दु स्तरमा तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न, कुन कुरा हामी गर्नेछौं।
अन्तमा हामी कन्फिगरेसन बचत गर्न दाँया कुनामा बायाँ तीर चयन गर्छौं।
2 बिन्दुहरूका समूहहरू सिर्जना गर्नुहोस्
अब हामीलाई रुचि के छ कि आयात गरिएको बिन्दुहरूलाई समूहबद्ध गरिएको छ, यस अवस्थामा उनीहरूको डेटाबेसमा रहेको एक विशेषता अनुसार। यो गर्नका लागि, हामी "प्रोस्पेक्टर" ट्याबमा जान्छौं र पोइन्ट ग्रुप्स विकल्पमा हामी राइट क्लिक गर्दछौं, "नयाँ" चयन गरेर।
पहिले एउटा समूह बनाऔं जसलाई हामी "स्ट्रफ म्यानहोल" भन्नेछौं र हामी पोइन्ट शैली र लेबललाई स्ट्यान्डर्डको रूपमा छोड्नेछौं। त्यसो भए म्याच फिल्टरमा (कच्चा डेस्याक मिलान) हामी MHST * छान्छौं, यसले सबै पोइन्टहरू बनाउँदछ जुन यो छ उनीहरूको विवरणमा तिनीहरू यो समूहमा जान्छन्।
दोस्रो समूह हामी "डिस्प्ट प्वाइन्ट" लाई कल गर्नेछौं हामी फिल्टर POND * को रूपमा छोड्छौं, सधैँ मानक बिन्दु र लेबलको शैलीमा छोडेर यद्यपि यो पछिल्लो एकै पटकमा "_ सबै अंक" समूह भनिन्छ।
निस्सन्देह, यदि हामी क्वेरी बिल्डर ट्याब देख्नुहुन्छ भने, हामीले एसएलसीमा छान्नु भएको छ जुन यसले यो कोड महसुस गरेको छ भन्ने कुराले जटिल जटिल काम गर्न सक्छ।
3 डाटाबेसबाट बिन्दुहरू आयात गर्नुहोस्
हामीले गरेको जटिल जटिल कुरा, अब के आयो ती आयात गर्न के हो।
सधैँ प्रोजेक्टर ट्याबमा, दाँया माउस बटनमा पोइन्टहरू छान्नुहोस् र "सिर्जना गर्नुहोस्" छनौट गर्नुहोस्।
यसले विभिन्न विकल्पहरूको साथ प्यानल प्रदर्शन गर्दछ, यस अवस्थामा हामी बिन्दुहरू आयात गर्न टाढा दायाँपट्टिको एक प्रयोग गर्नेछौं। एक पटक चयन भएपछि, हामीलाई सोध्नुहोस्
स्पष्ट गर्न आवश्यक छ कि तपाईं ढाँचामा अन्य डेटा आयात विकल्पहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै अल्पविराम, रिक्त स्थानहरू र बिन्दु अर्डरबाट अलग गरिएका पाठहरू, समिकरण x, y, z
यहाँ हामी छनौट गर्दछौं कि बाह्य डेटाबेसबाट आयात छ र हामी डाटाबेसको मार्ग चयन गर्दछौं। हामी तलका विकल्पहरू अचयन छोड्दछौं, त्यसो भए ठीक छ।
अन्तिम परिणाम "_all बिन्दुहरू" दाँया क्लिक गरेर प्रदर्शित गर्न सकिन्छ र बिन्दुहरूको पूर्ण दृश्यमा जुम चयन गर्न सकिन्छ।
जब तपाईं बिन्दुहरूमा माउस सार्नुहुन्छ, उपकरण टिपले बिन्दुहरूको गुणहरू देखाउँछ, तपाईलाई विचार गर्नु पर्छ कि बिन्दुहरूको प्रत्येक समुहमा दाँया क्लिक गर्नुहोस् र गुणहरू चयन गर्नुहोस्, विस्मयादिबोधक चिन्हको साथमा पहेंलो चिन्हको साथमा चयन गर्नुहोस्। अद्यावधिक गर्न विकल्प
व्यायाम गर्न तपाईं यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ dwg फाइल आयात गरिएका बिन्दुहरूसँग।
यदि तपाइँ यो फेरि गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले सबै अवस्थित बिन्दुहरू मेटाउन सक्नुहुन्छ तिनीहरूलाई व्यायामको चरणहरू अनुसरण गरेर फेरि आयात गर्न।
नागरिक 3D DWG
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो सीएडी / जीआईएसमा नेटबुक परीक्षण गर्दै
अर्को पोस्ट आटो सीएडी सिविल एक्सएनएमएमएक्सडीको साथ कसरी समानुभूति सिर्जना गर्नेअर्को »
१ Auto जवाफ "AutoCAD सिभिल थ्रीडी, बाह्य डेटाबेसबाट पोइन्टहरू आयात गर्नुहोस्"
म शीर्ष पोइन्टहरू आयात गर्न सक्दिन। सिभिल अटोड र ग्राफमा र भोल्युम फेला पार्न यो ठोस बनाउँनुहोस् यदि तपाईं मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भने
माफ गर्नुहोस्, हामीसँग यो उपलब्ध छैन।
नमस्कार, के हो? म तपाईंलाई एमडीबी मा डाटाबेस को ढाँचा को अभ्यास गर्न को लागि पूछ सकते हो। धन्यवाद र सादर।
ट्युटोरियल लागि धन्यवाद, अब म ब्लक मेरो रेखाचित्र रहन आयात रूपमा, अर्थात् Acad तपाईंले स्टेशन डंडे रूखहरू ब्लक आयात गर्न siven साँचाहरू भूमि, अन्तमा, यो tema.si सहकार्य मूल्यांकन गर्न सक्छन् सिविल 3D मा र यो प्रक्रिया के हो ..
म तिमीलाई धन्यवाद भन्न सक्दिनँ यदि तपाईंले लेबल स्टाइल पहिल्यै जानुभयो भने, म त्यसोभएको थिएँ कि हरेक पटक ती अंकहरू टिपेर छुनुहोस्।
म टिपको लागि पर्खाइरहेको छु।
तपाईंलाई सस्तोमा धन्यवाद दिनुहोस्
g! तपाईंको योगदानको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो धेरै उपयोगी भएको छ
ठिक छ, के भइरहेको छ केहि थाहा छैन। यो हुन सक्दछ कि ढाँचा संख्याको रूपमा नभई पात्रहरूको रूपमा हो, तर यो समस्या हुन हुँदैन।
albaro parra भन्छिन्:
उजूरीको लागि धन्यवाद
ट्यूटोरियल राम्रो छ, तर मलाई समस्या छ जब म यो मात्र गर्छु जब देखि डाटाबेसबाट पोइन्टहरू आयात गर्दा यसले मलाई बताउँछ कि म यो वा फाइल क्षतिग्रस्त हुन सक्दैन, मलाई मद्दतको लागि धन्यवाद र यदि म केहि गलत गरिरहेको छु भने
यी योगदानहरूको लागि धन्यवाद!
यो आवश्यक छैन, यो मामला हो कि ल्याण्ड डेस्कटपले केहि कुराबाट सफा पार्यो SoftDesk जसमा त्यहाँ एक डाटाबेस हो जुन मानदण्ड भण्डारण गरिएको छ र त्यहाँ कुनै खुला परियोजना यो काम गर्न असम्भव थियो।
सिभिलको अवस्थामा, यद्यपि यो नक्सामा, डाटाबेससँग सम्बन्धित हुन सक्छ जुन तपाईले एक्सएमएल जस्ता विशेषताहरू भण्डार गर्न सक्नुहुनेछ।
सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो पृष्ठमा दिनु भएको शिक्षाका लागि धन्यवाद छ, र सिभिल शंक 3d ल्यान्ड डेस्कटपको विपरित यसलाई प्रोजेक्टसँग सम्बद्ध गर्न आवश्यक छैन।
धन्यवाद मास्टर, मैले यी सहयोगको साथ जारी राखें, जस्तै सतह प्रोफाईल आदि।